fijery miabo – Blaogin'i Voniary
Étiquette : fijery miabo
.Mandresy ny Coronavirus: sakafo ara-pahasalamana, fiainam-panahy, fahaizana miaina ny ankehitriny, fanadiovana ny saina
16 avril 2021	 0
Ny fahaizana mankasitraka dia fomba fikolokoloana ny toe-tsaina mpandresy sy ny fijery miabo ao aminao mba hahaizanao mahita izay tsara hatrany amin'izay mitranga
27 août 2020	 2
Boky Malagasy PDF azonao vakiana mandritra ny fihibohana
Raiso an-tanana ny fiainanao, boky PDF, ebook nosoratan'i Voniary
20 mai 2020	 4
Ry vehivavy, azo atao ny miaina am-pahasambarana ireo dingam-piainanao rehetra
Matetika ny fianarana sy ny asa toa manaraka eny ihany ary vitavita ho azy eny ihany. Fa ny andavanandrom-piainan’ny vehivavy kosa dia miankina betsaka amin’ireo dingam-piainana lalovany araka ny lalàn’ny natiora, tsy inona izany fa ny mpitovo, ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana ary ny vady sady reny. Fifampizarana teo amin’ny vehivavy maromaro samy miaina... Lire la Suite →
21 mars 2019	 0
Fiofanana : « Miantomboka avy ao anaty ny fiadanana »
Sambany eto Antananarivo ary eto Madagasikara mihitsy no hisy fiofanana momba ny « Ho’oponopono », fomba avy any Hawai miompana amin’ny fampivelarana ny maha-olona. Hotanterahina ny Sabotsy 23 Martsa 2019 ho avy izao izy io, manomboka amin’ny 1 ora sy 30 minitra ka hatramin’ny 4 ora folakandro ao amin’ny Red Zone Coworing Tsiadana. Nathalie Rakotoniaina, mpanorina ny... Lire la Suite →
Tiasoa : “Tsy misy fanaka malemy izany!”
Vao 11 taona monja izy dia efa nanokatra blaogy. 10 taona taty aoriana, nanangana ny orinasany manokana, Book News Madagascar, miompana amin’ny blaogy sy ny tolodraharaha an-jotra, izy. 23 taona izao i Tiasoa Samantha na fantatry ny rehetra amin’ny solon’anarana hoe “Tiasy” any amin’ny tontolon’ny blaogy. Mbola manjohy eny ihany ny fankafizany miblaogy ary tanjony... Lire la Suite →
8 mars 2019	 5
Rasamy: Fitia mizara izay kely anana no nandrisika ahy hanoratra blaogy sy hamoaka amboaran-tononkalo
Mpiblaogy miroa teny, mpanoratra, mpampianatra ary tompona orinasa RASAMISON Aimé na RASAMY. Ny fitiavany ny teniny sy ny taniny no solika mandrehitra indrindra ny aingam-panahiny. Efa saika voatetiny ireo faritra rehetra eto Madagasikara noho ny fitiavany mianjoria sy mizaha tany ary zarainy ao anatin’ny blaoginy izany. Izao indray, nivoaka ny boky voalohany mirakitra ny amboaran-tononkalony,... Lire la Suite →
2 février 2018	 1
Tsy maintsy misy mamy ao anatin’ny mangidy
Tsy misy fanaintainana sy fijaliana lalina mihoatra noho an’ny vehivavy mihetsi-jaza fa ny valiny avy eo kosa dia ilay fanomezana sarobidy sy mamy indrindra: ilay sombiniaina. Azo itarafana ny fiainana iray manontolo izany: MISY HEVINY NY FIJALIANA, MISY VALINY NY FAHARETANA. Raha misy sedra na fotoan-tsarotra iainanao dia misy hafaliana, fahasoavana ary fandresena ao ambadika... Lire la Suite →
10 octobre 2017	 2
Taona vaovao : toe-tsaina vaovao
Araraoty izao taona vao miantomboka izao andraisanao fanapahan-kevitra tsara. Raiso an-tànana ny fiainanao fa aza miankin-doha amin’ny hafa. Mandraisa lesona avy amin’ireo zava-nitranga teo aloha, sahia mametraka tanjona, manàna fijery miabo ary indrindra apetraho amin’Andriamanitra hatrany ny fiainana dia ho mpandresy lalandava ianao. Mandray lesona Manaova jery todika ny taona lasa. Inona ny vita ? Inona... Lire la Suite →
16 janvier 2017	 0
Marina fa tanjonao ny ho tonga amin’ny toerana iray. Azonao atao anefa ny maka tsirony eny an-dàlana. Omeo lanjany mitovy amin’ny tanjona tianao ho tratrarina ny làlana ahatongavanao amin’izany. MARO NY VOKA-TSOA AZO MANDRITRA NY DIA Nifampitantara ny fialan-tsasatra izahay mpinamana indray andro izay. Mailaka ery aho nilaza fa nanao lava alina : « tsy hitahita akory... Lire la Suite →
14 septembre 2016	 0